Global Voices teny Malagasy » Ny Fiakaran’ny Maripana Eto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Fiakaran'ny Maripana Eto Madagasikara
Voadika ny 18 Aogositra 2017 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Alice Backer Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
(Marihina fa tamin'ny 23 Oktobra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Farihy any amin'ny Faritra , Madagasikara. Sary avy amin'i Claude Springer. 
Nanasongadina ny vokatry ny fiakaran'ny maripana teto amin'ny firenena  ilay bilaogera Malagasy Aiky avy ao amin'ny vondrona bilaogy Madagascar Croissance tamin'ity herinandro ity rehefa avy nahita ny horonantsarin'i Al Gore momba ny fiakaran'ny maripana ka niteraka adihevitra teo amin'ireo mpaneho hevitra tao amin'ny bilaogy.
Ny Rotsakorana, ny Rivodoza ary ny Fiotazana Letchi
Ao anatin'ny toe-javatra misy ankehitriny, tsikaritra ireo tsy fetezana maro izay toa mifandray amin'ity tranga ity. Voalohany indrindra, rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny orana, nahatsikaritra ireo nanana ny fahafahana nitsidika ny nosy lehibe tamin'ny herintaona fa sambany tao anatin'ny taona maro no tsy nisy toy ny isan-taona ny rivodoza.
Ny tena loza, saika tsy nisy mihitsy ny orana!
Tamin'ity taona ity, tara ny fahatongavan'ny vanim-potoan'ny orana. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiotazana letchi izany ohatra na amin'ny vokatra hafa izay mila orana betsaka. Inoana amin'izao fotoana izao fa tsy ho tsara ny fiotazana amin'ity taona ity (2006) ary
Nanome lanja ny olan'ny tsy fahampian'ny orana tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra i Tattum, mpamaky iray ao amin'ny bilaogy rehefa nahatsikaritra ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ny tontolon'ny bilaogy:
Azonao sary an-tsaina ve fa tsy nisy mihitsy ny orana, ary ambany dia ambany ny haavon'ny rano ao Mandroseza, ka ny toerana manodidina misy ny ray aman-dreniko, izay ahitana fantson-drano efa antitra loatra, dia tapaka matetika ny rano mandritra ny tontolo andro.
Manontany tena ihany koa aho hoe nahoana ny ankamaroan'ny mpifanolo-bodirindrina aminay no manana sinibe fanangona-drano eny amin'ny zoron'ny tokotaniny, ary azoko ny anton'izany ankehitriny … Izany no zava-nitranga … Tsy haiko ny hanazava ny fahasahiranan'ny fianakaviako (sy ny maro hafa) manoloana ny toe-draharaha.
Ny Fiovan'ny Maripana
Hoy i Aiky nanohy tao amin'ny lahatsoratra ôrizinaly:
Toa nanakorontana ny toetrandro eto amin'ny firenena ny fiakaran'ny maripàna manerana izao tontolo izao . Tsikaritra ny fiakaran'ny maripàna maivana amin'ny ankapobeny alohan'ny vanim-potoana ara-dalàna. 1 ka hatramin'ny 1,5 degre Celsius io fiakaran'ny maripàna io . Raha ny marina, tokony ho eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 29 degre eo ho eo ny maripàna amin'izao vanim-potoana izao (volana Oktobra) kanefa 10 hatramin'ny 31 degre izany amin'izao fotoana izao.
Ny Faritra Lavitra No Tena Voa Mafy
Amin'izao fotoana izao, ireo faritra lavitra tahaka an'i Amboasary any atsimo no tena lasibatra. Tsy maharaka ny tetikasa isankarazany toy ny famatsian-drano ary mbola mihinana “Raketa” ny mponina ao an-toerana noho ny tsy fisian'ny sakafo hafa (mangahazo, vary, etc.)
Efa olana goavana ho an'ny planeta ny lavaka ao amin'ny ‘ôzônina’ ary raha manampy izany ny fiakaran'ny maripanan'ny tany dia mety hisy ny fiovana mivantana hita amin'ireo zavamanan'aina .
Teny ho an'ny tompon'andraikitra…
Ny Fandripahana Ala
Nanoratra tao amin'ny fanehoan-kevitra ny mpamaky iray hafa tao amin'ny bilaogy JoganY:
Aza adinoina ny manamarika fa voakasika lalina ihany koa isika satria “manana” valan-javaboarin'ny ala lehibe izay nodorantsika tao anatin'ny fitiavantena.
Mibahan-toerana amin'ny famahana ny vahaolana maharitra ny tsy fisian'ny feon'ny fieritreretana sy ny filantombony haingana ary miteraka voka-dratsy tsy hay harenina. Manimba ny tontolo ambanivohitra sy ny alantsika ny fitrandrahana ny tany famokarana tafahoatra amin'ny alàlan'ny fampiasana tavy sy ny fitrandrahana ny saribao. Na dia eo aza ny fanentanana goavana (na mino aho fa misy izany), very miandàlana any amin'ny renirano mikorianan'i Betsiboka na any amin'ny renirano mena iray hafa ny “Sehatra Maitso”… ao Madagasikara .
Nanome sosokevitra ny rafitra momba ny “Zon'ny Fandotoana” (zavatra mahatsiravina tena mahatsiravina) i Kyoto ao amin'iray amin'ireo fizaran-tantarany. Azoko sary an-tsaina indray fa misy ireo izay hirotsaka amin'ity hevitra vaovao ity (eny, manofinofy $, $!). Mety vao mainka hanimba zavatra bebe kokoa izany rehetra izany kanefa raha eto indray dia tsy misy ny azontsika atao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/18/105726/
 vokatry ny fiakaran'ny maripana teto amin'ny firenena: http://madarich.canalblog.com/archives/2006/10/17/2926967.html